Bangaphi abesetyhini, bazibukela ngokwabo kwisibuko, khumbula igama elibi le cellulite. Ngokuqinisekileyo, akuthathwa njengento eyenziwa yi-pathological phenomenon. Kodwa into eyona nto iyingozi kukuba iholele ekutshintsheni ubuhle besifazana. Ngokuqhelekileyo, esi sifo sichaphazela isisu, izibonda, izikhwebu kunye neziphambili. I-Cellulite ayichaphazeli kuphela abafazi abanomthwalo obunzima, kodwa banomzimba omncinci. Ngokukhethekileyo "ukungaphili" kubonakala ngathi i-cellulite. Xa ibhinqa ixesha elide alizange liyiqwalasele okanye lingayiboni le ngxaki. Akulula lula ukukrazula i-cellulite, kodwa ukungahoywa - ngokukodwa. Nangona kunjalo, ukulwa nokulwa ne-celulite engayithobeliyo ekhaya kusenokwenzeka.
Kukho iindlela ezaneleyo zokulwa ne-cellulite eqalisiwe. Kuphela kuphela "kodwa": ayisebenzanga yedwa! Isiphumo esihle siya kuza xa wenza ekhaya yonke inkqubo enzima. Ngoko uxolo "akukho xesha okanye ukhathele" aliyi kusebenza. Ngelo xesha siza kususa iimbali zamagama ngeendlela ezahlukeneyo zokuzicoca: ikhefu enye yommangaliso ayiyi kudala. Yonke into esiyibhale phantsi izaliselelane.
Kwaye into yokuqala ukuqala kunye neprogram yoxinzelelo. Ukuphepha ukungaphumeleli ebomini kunye neemeko ezixinzelelekileyo akunakwenzeka, kodwa kunokwenzeka ukuba utshintshe isimo sakho sengqondo kubo. Funda indlela yokufumana ixesha elihle nakwiindawo ezimbi. Ingqondo efanelekileyo ukuqonda ubugcisa bokuphumula. Yenza i-yoga, ukhulule zonke iinxalenye zomzimba, ukhulule uxinzelelo, vumela umzimba uphumle emva kwevava - kwaye unciphisa amathuba okuba i-cellulite yakho.
Emva kokubuyisela isimo sengqondo, unokuqhubeka ukuya kwisigaba esilandelayo sokususa i-cellulite ekhaya. Isinyathelo sesibini kukulawula isondlo sakho. Ungabandakanyeki kokutya kwakho okuthosiweyo, iimveliso zokutshaya, i-marinades, buns. Ukuba unesimo esithile kwi-cellulite, ke le mveliso kufuneka ikheshelwe ngaphandle kokutya kwakho ngonaphakade. Utshaya, umxhasi wokusela ikofi, utywala okanye i-carbonated drinks - zama ukufumana indawo emnandi neyayisebenzayo. Umzekelo, iziqhamo ezintsha kunye nemifuno yemifuno okanye i-herbal teas, i-latter iyancwitshwa nge-spoonful honey.
Ukutya kufuneka kube nevithamini ezifanelekileyo kunye neemaminerali, ingakumbi i-vitamin E, enceda ukulungelelanisa igazi kwesikhumba. Umncedisi wokulwa ne cellulite kwaye uncede uhlambulule umzimba, okwenene, amanzi. Ngomhla kubalulekile ukuba uphuze ukuya kwiiblasi ezilisibhozo zamanzi, mhlawumbi ubuncinci (kunye ne-mineralized low).
Ngaphandle kwengcinezelo yenyama ekhaya, kunzima ukulwa ne-cellulite. I-cellulite ibonakala kuqala apho ukujikelezwa kwegazi kunye ne-lymph kungaphumeleli ngenxa yokungasebenzi kwemisipha. Ngoko ke, zama ukuphepha yonke into ephula umjikelezo wendawo: iimpahla ezinxibileyo, izicathulo ezinezithende eziphezulu. Imisipha yomzimba yokusebenza iya kunceda umzimba:
• Cindezela umva wakho odongeni, imilenze ngexesha elifanayo - ububanzi bentendelezo ngaphandle. Slayida ngokukhawuleza uze uhlale "esihlalweni sobuhlalo". Kwakhona, ulungelelanise ngokukhawuleza, ulungelelanisa imisipha yomlenze ophantsi kunye namathanga.
• Bendela imilenze yakho, ulale emhlane wakho, ekhanda lakho. Ngexesha elifanayo cinezela izithende ndawonye. Emva koko, bhuqa imilenze uze uphinde ucindezele kwakhona.
• Thetha kwisisu sakho, phakamisa imilenze yakho engekho phezulu. Kule ndawo, bamba imizuzwana embalwa. Ukugcina iinyawo zakho kwisisindo - ziphazamise kwaye zivale kwakhona.
• Beka inyawo (kwindawo ephezulu kwinqanaba) lomlenze okunene emadolweni asekhohlo,
Ngelo xesha lixhomekeke kwisihlalo. Ukuphakamisa nokunciphisa i-pelvis amaxesha amaninzi. Emva koko utshintshe imilenze yakho kwiindawo.
• Njalo kusasa nakusihlwa, xa ulala embhedeni, uncike emilenzeni yakho ephakanyisiwe imizuzu embalwa eludongeni. Lo msebenzi uvusa ukujikeleza kwegazi kunye nokuhamba kwe-lymph.
• Thatha umkhuba wokuqhuba okanye ukubhukuda.
• Nsuku zonke, zithatha iimvula ezichaseneyo. Gcoba umzimba wakho ngesiponji, ukuxubha okanye iglavu elukhuni, ngelixa i-salt salt isetyenziswe.
Kukho imizila yonke yokuzongcola equkethe udaka olukhulayo kunye netyuwa ekhethekileyo yoLwandle Olufileyo. Ngokomzekelo, empini yokulwa ne-cellulite engayithobeliyo incedwa kakuhle yi-AHAVA yamaminerali. Uyakhupha ngaphandle kwamanzi amaninzi, amanqatha kunye ne-slag ukusuka emacaleni nasemathangeni. Emva kokuhlamba, ungasebenzisa izimonyo zokulwa ne-cellulite: iikram kunye nomphumo we-thermo, iimpawu zokumangalisa, i-wraps. Ngendlela, ezi zilandelayo zingenziwa ekhaya.
I-Wraps ngobumba obomvu. Ubumba buluhlaza ngumthombo wendalo we-microelements kunye ne-saleral minerals, uhlambulule kwaye uyakhubaza ulusu, usebenze ukujikeleza kwegazi. Ilayini kufuneka ihlanjululwe ngamanzi afudumele kummandla we-gruel, unokongeza amafutha anamnandi. Umxube kufuneka usetyenziswe emzimbeni kwaye uhlanganiswe nefilimu yomoya. Ukuba akukho zincinci ze-cellulite ezikhethekileyo, gquba ngeengubo kwaye ulale malunga neyure. Emva koko konke kuyimfuneko ukuhlamba kunye nokubeka okanye ukunika ukhilimu otyumayo okanye omanzi.
Ukuloba ngeju. Kuze kubekho udumo lwazo lwezilwanyana. Yisebenzise ngempumelelo kwimfazwe yokulwa ne-cellulite engayithobeliyo. Ubusi bendalo bukhipha ubuthi, buqinisa ukuhamba kwe-lymph kunye nokusabalalisa. Inkqubo yokugaya ifana neyodongwe, kwaye sibeka umxube onje:
• 200 gr. Hlanganisa ubusi kunye namaconsi amathathu eoli ebalulekileyo (i-lemon okanye i-orange);
• Hlanganisa ubusi nobisi okanye ukhilimu kumlinganiselo we-2: 1.
Iimpawu ezikhethiweyo zenziwa emva kweentsuku ezi-2 ukuya kwezi-3, ngokuya kwiinkqubo ezilishumi.
Ukuhamba kwi-sauna akungabazeki ukuba indlela ephumelelayo kunye neyokuzonwabisa yokulwa ne-cellulite engayithobeliyo. Kwi-sauna phantsi kwefuthe lokushisa okuphezulu kunye nomswakama kukho ukukhululwa kweetekisi, ukuphuma kwe-lymph flows more intensively. Uya kuphawula ukuba ulusu luya kuba lukhulu kwaye lukhulu. I-Sauna, njengongeziweyo kwinkqubo ephambili yokulwa ne-cellulite, ilungile kuzo zonke izigaba. Kodwa ukuba isigaba sokuqala sanele ukunyuka kwesinye ngeveki, ngoko kutyelelo-olulandelayo kufuneka kukhutshwe kuma-2-4 ngeeveki. Ngaphambi kokusebenzisa le ndlela, qiniseka ukuba awunayo nayiphi na ingqinano.
Ekhaya, unokwenza ukuzihlaziya. Apha, ubusi obukhankanywe ngentla kuza kusiza. Ukuxilisa kuhlambulule isikhumba kwaye kuzalisekile ngezinto ezincedo. Ngaphambi kokufaka isicelo, ujusi kufuneka uphelelwe kwindawo yokuhlamba amanzi. Ukuhlamba umzimba ngokunyakaza. Iingcali zikwacetyiswa ukuba zihlaziye ngokusetyenziswa kwamafutha abalulekileyo. Kwimizuzu engama-70 ml yeoli yemifino, yongeza ama-25 amanconsi ye-lemon, umsedare okanye i-juniper ioli, ukubunjwa kutyumle iingingqi. Kulabo banqwenela ukusebenzisa amalungiselelo alungiselelweyo, ngoko kwii-shelf ze-pharmacy kunye nevenkile unako ukufumana ama-anti-cellulite creams, kunye ne-brushhes kunye ne-mittens.
Kukho enye into engabonakaliyo, kodwa indlela enomdla yokulwa ne-cellulite-i-aromatherapy. Ama-Receptors okanye iiseli ezibuhlungu azifumanekanga kuphela kwiimbumba zomlomo kunye neempumlo, kodwa zichithwa kuwo wonke umzimba. Banika ulwazi kwinkqubo yesantya malunga nendlela yokusebenza. Kwi-anti-cellulite aromatherapy, kunconywa ukuba kusetyenziswe kakhulu imixube ehlukeneyo yeoli kunye neocebisi ezincedisayo kunye namafutha abalulekileyo - i-citrus (orange mandarin, i-orange, i-grapefruit, i-lemon), i-conifers (umjunipha, ipineyini). Ngokomzekelo, ukulungiselela ubisi-aromatic baths, udibanise ingilazi ye yogurt ngamatye alishumi eoli efunekayo. Ubungakanani bokuthabatha amabhethi akufanele kudlule ngaphezu kwemizuzu engamashumi amabini, kunye nobushushu bamanzi - ngaphakathi kwama-36 ukuya kuma-37 degrees. I-oyile ebalulekileyo ayinakunceda kuphela ukuphucula isikhumba sakho, kodwa unokufumana umphumo owongezelelweyo: ukunciphisa umva wokulambela, ukuba uhlala kwisondlo esiqinileyo, ujabule, uphumule.
Ekulweni nokulwa ne cellulite enganakuhlala ekhaya, zonke iindlela zilungile. Kodwa kufuneka zisetyenziswe ngendlela enzima! Kule nto kuphela kunokwenzeka ukunqoba i-cellulite.
I-tan enhle ngaphandle kwelanga
Ngaba kukho impembelelo yokusebenzisa i-massage vibrating
Indlela yokurhoxisa amanqaku atyaliweyo emzimbeni
Amaqanda atsiweyo kwisitya sokutya
I-Horoscope ngo-Septemba 2017 ye-Scorpion Women
8 Izinyathelo zokuBomi obutsha
Indlela yokuhlakulela intetho kumntwana one-Down syndrome?
Indlela yokugqoka i-stylishly
Isifundo soxolo ngoSeptemba 1, 2017 - iingcinga zeklasi yeyure
Ubuhle kunye nempilo ngexesha lokukhulelwa
Ikhanda elinokuvala phambi kwexesha elide
Okroshka kwizivuno zokungena